Al-Shabaab oo Duqeeyay Ciidamada Kenya Ee Heysta Ceelwaaq. – Shabakadda Amiirnuur
Al-Shabaab oo Duqeeyay Ciidamada Kenya Ee Heysta Ceelwaaq.
July 31, 2019 10:22 am by admin Views: 48
Wararka ka imaanaya xad beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka gobolka Gedo ayaa sheegaya in weerar xooggan lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada gummeysiga KDF.
Saaka aroortii ayay xoogaga Al Shabaab weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada Melleteriga Kenya ee kuyaal duleedka degmada Ceelwaaq. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dhowr madfac lala helay gudaha saldhigga ciidanka Kenya waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo gaaray ciidamada laweeraray.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay sheedda ka arkayeen qiic iyo uuro madoow oo cirka isku shareertay waxaana loo malaynayaa in ay gubteen qaar kamid ah teendhooyinka gudaha saldhigga uga dhisan ciidanka Melleteriga Kenya.
Waa markii 2aad oo weerar madaafiic ah uu la kulmo saldhigga ciidamada gummeysiga Kenya ee duleedka degmada Ceelwaaqo, maalmo ka hor ayay aheyd markii sidaan oo kale uu saldhigga weerar xooggan ugala kulmay Al Shabaab.